10-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyay isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka sanadkan 2018 – Filimside.net
Taariikhda: April 12, 2018
Filimka weyn Padmaavat ayaa hogaaminayo 10-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka (Worldwide Gross) sanadkan 2018.
Padmaavat wuxuu keenay 544 Crore wadar ahaan dibad iyo dal waana filimka 7-aad ee taariikh ahaan lacagaha ugu badan soo xareeyo iyadana waa guul kale oo aad u weyn.
Baaghi 2 waa filim kale oo 200 Crore dhaafo ganacsigiisa 2018 dibad iyo dal marka la isku daro weliba ilaa 250 Crore ayuu ganacsigiisa guud gaari doonaa.
Waxaa kaloo soo jiidasho leh in filimka iska yar Sonu Ke Tito Ki Sweety ganacsigiisa isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka 150 Crore ku istaagi doono.
Rubuca ugu horeeyay sanadkaan 2018 ama sedex bilood ee hore ganacsiga kobac wanaagsan ayuu gudaha Hindiya ka sameeyay laakiin ganacsiga suuqyada caalamka ma kobcin inkastoo Padmaavat wax badan daboolay.
Padmaavat waa filimka labaad ee Hindi ah kaasi oo lacagaha ugu badan soo xareeyo suuqyada caalamka wuxuuna keenay $29M waa hadii aan xisaabta lagu darin filimada wajiga labaad laga daawaday China, Taiwan, Korea iyo meelo kale.
Filimada kale ee sanadkaan 2018 la daawaday sidoo kalena ganacsi ahaan dibad iyo dal marka la isku daro 100 Crore gaareen waxaa ka mid ah Raid iyo Pad Man laakiin ganacsi weyn oo saameyn leh ma aysan sameynin sedexda bilood ee hore waxaa ka saameyn badnaadeen Padmaavat, Baaghi 2 iyo Sonu Ke Tito Ki Sweety.
Fadlan hoos kaga bogo 10-ka filim ee lacagaha ugu badan sanadkaan soo xareeyeen isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka (Worldwide Gross) sida shabakada BOI soo daabacday:
1. Padmaavat – 544 crore (72-maalmood)
2. Baaghi 2 – 214 crore (13-maalmood)
3. Sonu Ke Titu Ki Sweety – 149 crore (45-maalmood)
4. Raid – 141 crore (25-maalmood)
6. Hichki – 69 crore (18-maalmood)
7. Pari – 40 crore
8. Aiyaary – 33 crore
9. Hate Story 4 – 25.50 crore
10. 1921 – 21.50 crore
Waxaa Aqrisay 993